कसरी अन्धो घोडी बस र चाँडै
शायद, सबै साना बच्चाहरु साना घोडा, "मई साना टट्टू" भनिएको छ जो बारेमा कार्टून थाहा छ। र सबै भन्दा, हरेक बच्चा यी सुन्दर सानो प्राणीहरू कसरी sculpt सिक्न चाहन्छ। तपाईं विभिन्न सामाग्री को ponies कसरी sculpt सिक्न यस लेखमा, यो विचार र कुन उपकरण प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
सानो खिलौने Sculpt, स्मृति चिन्ह धेरै फरक सामाग्री को हुन सक्छ। र पहिलो, हामी बारेमा भन्नेछु plasticine। माटो फरक छ। एक राम्रो कोमलता र रंग को एक विस्तृत प्यालेट छ, र अन्य एक ठोस छ र केवल केही रंग उपलब्ध छ। पहिलो बच्चाको रचनात्मकता को लागि अभिप्रेरित छ, तर दोस्रो - एक मूर्तिकला माटो, कास्टिंग लागि सामूहिक मात्रा सिर्जना गर्न मुख्य प्रयोग गरिन्छ।
तपाईं आफ्नो बच्चाहरु संग अन्धो घोडी plasticine जस्तै लाग्छ भने, यो बच्चाको रचनात्मकता लागि एक साधारण माटो लिन राम्रो छ। यो सस्तो र नम्र छ। यो सामाग्री मुख्य नकारात्मक उच्च तापमान मा ढल्छ सक्छ, यो सिर्जना भएको कलाकृतिहरू, छोटो-बस्ने हो कि छ (उदाहरणका लागि, तपाईं सूर्य मा घोडी छोड्दा), र कठोर कहिल्यै।
तपाईं मूर्तिकला र आफ्नो फसल बनाउन चाहनुहुन्छ भने, एक विशेष माटो किन्न। यो सामान्यतया मात्र चित्रकला र रेखाचित्र लागि विशेष स्टोर सामान बिक्रि छ। यस्तो माटो थप टिकाउ र कठिन छ।
शरीर र घाँटी - आँखा बंद पहिलो आधार मा। त्यसपछि चार ससेज, शरीर एक टाप र cleaves तिनीहरूलाई फारम बनाउन। एक सानो बल टाउको गरे। को nostrils र मुख संकेत गर्न नबिर्सनुहोस्। तपाईं बहुलक माटो बाट घोडी sculpting भने, त्यसपछि यो चरण मा, workpiece राम्रो यसलाई विकृत छैन भनेर, Bake छ। त्यसपछि, सानो थोपाहरूद्वारा देखि आकार कान plasticine। को माने र पुच्छर अर्को रंग अन्धो Plasticine। पन्जा रंग संग चित्रित गर्न सकिन्छ। टट्टू तयार छ!
तपाईं त अन्धा घोडी, कागज आपूर्ति वा समाचार पत्र अघि, आफ्नो शिल्प perpetuate गर्न चाहनुहुन्छ भने। पहिलो तपाईं PVA गोंद मा कागज blotted, र त्यसपछि यसलाई आफ्नो workpiece पेस्ट र प्रतीक्षा यो dries सम्म। त्यसपछि, यो preform दुई वा बढी भागमा कटौती गरिएको छ। त्यसपछि माटो बाहिर झिकेर छ, र workpiece फिर्ता चिपके। कागज को केही थप तहहरू संग भन्दा टाँसियो को टट्टू समाधान गर्न।
यस्तो खाली सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ (वा डिकोउपेज प्रविधी सजाने) यसको रंग र स्वाद मा। र बाँकी माटो अन्य जनावर धेरै sculpt गर्न।
टट्टू बहुलक माटो
तपाईं अन्धो घोडी इन्द्रेणी, आकस्मिक सम्पर्क वा गिरावट द्वारा SPOILED छैन जो जस्तै लाग्छ भने, यो बहुलक माटो प्रयोग गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। तपाईं ढाल्नुहोस् गर्न सक्छन् र यो सामाग्री को बच्चाहरु। प्लास्टिक को मात्र बेफाइदा यसको मूल्य छ। उदाहरणका लागि, 56 ग्राम वजन माटो को एक पट्टी 100 ग्राम वजन माटो को एक प्याक भन्दा बारे 3-4 पटक अधिक महंगा लागत।
प्लास्टिक को गुण मा माटो जस्तो। यसको फरक प्लास्टिक Bake गर्न आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। त्यसपछि यो दृढ र लोचदार हुनेछ। तपाईं पकाउने तापमान अन्यथा घोडी बाल्न सक्नुहुन्छ पालना गर्नुपर्छ।
अन्धो घोडी सेतो plasticine वा माटो अघि, आफ्नो हात तालिका मा धूलो धुन र हटाउन निश्चित हुन। अन्यथा, आफ्नो काम ठीक धूलो कुरूप कणहरु हुनेछ। को सुखा गर्दा उत्पादन, तपाईं अझै पनि Motes, आफ्नो सुई भन्दा दस्तक वा ठीक स्यान्डपेपर मेटाउन प्रयास फँस देखे।
अब विस्तार र। पहिलो, अरूलाई भन्दा धेरै ठूलो हुनेछ एक जो छ भागहरु, मा प्लास्टिक को एक टुक्रा विभाजन। शरीर आकार र घाँटी को सबै भन्दा ठूलो भाग देखि। बाँकी टुक्रा को खुट्टा, थूथन घोडी गर्छन, र आफ्नो बाछो गर्न cleave पर्छ। Seams बिस्तारै आफ्नो औंलाहरु संग समतल। त्यसपछि कालो दुई साना बलमा आँखा बनाउन। सेतो glare zapechetsya घोडी पछि रंग पहिले नै कोरिएका गर्न सकिन्छ। दुई प्लास्टिक टुक्रा को, थोपाहरूद्वारा, अन्धा lugs मा गठन। यो चरण मा घोडी Bake गर्न सक्नुहुन्छ। एक औंठाछाप उपस्थिति याद गर्नुहोस्। तिनीहरूले भने, त्यसपछि बिस्तारै तिनीहरूलाई समतल। caked खेलौना पछि, तपाईं माने र पुच्छर मोडेलिंग सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो गर्न, राम्रो sausages धेरै रोल र त्यसपछि बिस्तारै घोडी को Prilep। पनि पाक्नु समय। टट्टू तयार छ!
तपाईं उपयोगी हुन सक्छ कि उपकरण
तपाईं sculpt गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि एक माटो र माटोको पर्याप्त छैन! त्यसैले, अन्धो घोडी अघि, आवश्यक उपकरण तयार। तिनीहरूले, हल्का सस्तो र तिनीहरूले कटौती गर्न सकिन्छ रूपमा बच्चाहरु, प्लास्टिक स्ट्याकहरूको फिट।
लागि बहुलक माटो को मोडेलिंग विभिन्न उपकरणहरू गर्न उपयोगी हुन सक्छ - यो extruder गर्न तीव्र चक्कु र पास्ता मिसिन देखि। उदाहरणका लागि, extruder धेरै प्रभावकारी घुम्रेको माटो गर्न सकिन्छ। तर एक पास्ता मिसिन संग, तपाईं, पातलो तहहरू मा माटो रोल गर्न त saddles र काठी cloths लागि workpiece कटौती गर्न सक्षम हुनेछ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, माटो मा sculpt र बहुलक माटो एकदम सजिलो छ। मुख्य कुरा सही सामाग्री र ब्रान्ड चयन गर्न, र पनि आवश्यक उपकरण बारेमा भूल छैन।
बालिका लागि crochet टोपी ... kaie तिनीहरूले?
आफ्नो हातले हलोवीनमा चुडैल पोशाक: ढाँचा, निर्देशन
ढाँचाहरू बैग, तपाईं रचनात्मक हेर्न अनुमति दिन्छ
यस्तो उज्ज्वल सजावट तत्व रूपमा कृत्रिम रंग को मूल संरचना
ज्यामितियआकार को आवेदन - मजा सिक्ने
शुरुआती लागि bobbin बुनाई: एक मास्टर वर्ग चित्र र सिफारिसहरू
जब घर मा के एक दाँतको दुखाइको?
टर्की काठी मस्तिष्क: मानव शरीर, विकृति र निदान मा कार्यात्मक भूमिकाको
कसरी नजिक विभिन्न तरिकामा स्ट्रबेरी को compote
मोती को रूपमा गोही बनाउने? Beading मात्रा। गोही योजना मनका
दाखमद्य को एक गोप्य नाम कस्तो?
"Badyaga" चोटपटक: समीक्षा (पाउडर, मलम र जेल), निर्देश पुस्तिका
क्रोएसियाली अन्डा सर्वश्रेष्ठ poppers!
अदुवा तेल: गुण र समीक्षा
रोग erysipelas। र तपाईं के छ थाहा?
सुझाव र चाल: पासवर्ड यदि aypad कसरी अनलक गर्न
सही ग्राफिक्स कार्ड कसरी चयन गर्न
वकील को एक शक्ति को अधिकतम अवधि